Canshuurta Dhaxalka: Waxa ay Tahay, Sida Loo Xisaabiyo Iyo Cidda Bixinaysa | Maaliyadda Dhaqaalaha
Casudi casals | 30/07/2021 16:00 | Cashuurta
Jahliga dartiis, dad badan ayaa gariira oo kaliya maqalka ama arka erayga “canshuuraha”. Waa wax caadi ah in canshuur laga bixiyo ku dhawaad ​​wax walba: cuntada, guryaha, firaaqada, gaadiidka, iwm. Sidaa darteed la yaab ma leh in aan sidoo kale bixinno marka aan wax dhaxalno. Canshuurtaas waxaa lagu magacaabaa canshuurta dhaxalka.
Maqaalkan waxaan ku sharxi doonnaa nooca canshuurta noocaan ah, sida loo xisaabiyo iyo cidda bixinaysa. Markaa haddii aad rabto inaad hore u sii ogaato inta ay tahay inaad bixiso ama aad rabto inaad wax badan ka ogaato mawduuca, waxaan kugula talinayaa inaad sii waddo akhriska.
1 Waa maxay canshuurta laga bixiyo dhaxalka?
2 Sidee loo xisaabiyaa canshuurta dhaxalka?
2.1 Saldhigga la canshuuro, dhimista, kootada oo buuxa, boqolleyda, kootada canshuurta iyo isku dhufashada isugeynta
2.2 Gunnooyinka, jar -jaryada iyo wadarta bixinta
3 Yaa bixiya cashuurta dhaxalka?
Waa maxay canshuurta laga bixiyo dhaxalka?
Marka qof qaraabadeena ah dhinto oo / ama aan ku muuqano rabitaanka qof, marka waqtigiisu yimaado waxaan dhaxalnaa dhammaan ama qayb ka mid ah hantidiisa, taas oo ku dambaysa noqoshada qaybteenna. La wareegitaankan cusub cashuur la'aan. Markaan helno, waa inaan bixinnaa canshuurta dhaxalka. Isla sidaas oo kale ayaa ku dhacda deeqaha: Haddii aan helno dhaxal ama deeq, waa inaan bixinnaa cashuur. Kuwa u xilsaaran maaraynta canshuurta noocaan ah waa Bulshooyinka Madaxa Bannaan. Sidaa darteed, helitaanka dhaxalka Andalusia, Asturias ama Madrid waxay leedahay cawaaqib xumo dhaqaale oo aad ugu kala duwan ka-faa'iideystayaasha ama kuwa dhaxalka leh.
Dhanka Canshuurta Dhaxalka iyo Hadiyada, waa canshuur toos ah. Si kale haddii loo yiraahdo: Waxaa lagu dabaqaa dakhliga dhaqaalaha iyo badeecadaha dadka. Maxaa ka sii badan, waa horukac dabiici ah, taas oo macnaheedu yahay in heerka cashuuruhu kordho marka saldhigga cashuurtu kordho.
Sidee loo xisaabiyaa canshuurta dhaxalka?
Waxaa muhiim ah in la ogaado in canshuurta dhaxalka marka laga hadlayo dhaxalka ay tahay in la bixiyo muddo lix bilood gudahood ah laga bilaabo maalinta uu dhintay. Si loo xisaabiyo dejinta cashuurtan, dhowr xisaab ayaa loo baahan yahay. Aan aragno iyaga tallaabo tallaabo:
Alaabta guriga (hantida ma guurtada ah) + Hantida iyo xuquuqda = Hantida guud
Hantida guud - (Dacwadaha + Deymaha + kharashyada laga jari karo) = Hantida saafiga ah
Dhaxalka saafiga ah / Tirada dhaxalka sida waafaqsan xeerarka ama dardaaranka = Qeybta dhaxalka shaqsiga
Qeybta dhaxalka shaqsiyeed + Caymiska nolosha (haddii ay jirto) = Dakhli la canshuuri karo
Saldhigga cashuurta - Dhimista = Saldhigga cashuurta
Saldhigga canshuurta + Boqolkiiba canshuurta ama sicirka = Lacag dhan
Qoondo buuxda + Isugeyneyaal badan = Kootada canshuurta
Heerka canshuurta + Gunooyinka iyo jar -jaryada = Dejinta ama wadarta la bixinayo
Xisaabintaani waxay u muuqataa mid aad u dhib badan jaleecada hore. Si aan arrimaha kuugu fududeyno, waxaan kuu sharxi doonnaa waxay yihiin iyo sida loo helo qaar ka mid ah fikradahaas. Si kastaba ha ahaatee, maskaxda ku hay taas qaar badan oo ka mid ah qiimayaashani waxay ku xirnaan doonaan Bulshada ismaamulka ah ee aan ku jirno, maadaama ay iyagu yihiin kuwa maamula Canshuurta Dhaxalka iyo Deeqaha.
Saldhigga la canshuuro, dhimista, kootada oo buuxa, boqolleyda, kootada canshuurta iyo isku dhufashada isugeynta
Sababtoo ah hantideenna ayaa la kordhiyaa ka dib markaan helno dhaxal, waa inaan bixinnaa. Sababtaas awgeed waa inaan marka hore xisaabinaa saldhigga canshuuraha. Tan waxaa lagu helaa qiimaha saafiga ah ee hantida iyo xuquuqda ka kooban hantida guud. Hoos -u -dhac ku tiirsan Bulshada is -maamulka ah ayaa laga jari karaa. Hoos -u -dhigiddan waxay noqon kartaa dabeecad ahaan hantida, naafanimada ama xiriirka, iyo kuwo kale, waxayna keenaysaa bixinta.
Markaan helno saldhigga canshuuraha, waa waqtigii la adeegsan lahaa qiimaha laga baqo: Boqolkiiba canshuurta. Sida hoos -u -dhigidda, boqolleydaani waxay sidoo kale kuxirantahay Bulshada Madaxbannaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qawaaniin dawladeed oo dejisa qiime u dhexeeya 7,65% iyo 34%, taas oo ku xidhan wadarta guud ee saldhigga la canshuuro. Mabda 'ahaan, qiimaha dhaxalku intuu sareeyo, waa in aad wax badan bixisaa. Sida ugu dhakhsaha badan ee loo adeegsado boqolleyda canshuurta dhaxalka, khidmadda oo dhan waa la helaa.
Si aad u hesho kootada canshuurta, xisaabtan kuma filna. Qiyaasta buuxda, isuduwayaasha isku dhufashada waa in sidoo kale lagu daraa. Kuwani waxay ku kala duwan yihiin hadba abtirsiimadii hore u lahayd dhaxalka iyo kooxda qaraabanimo ee marxuumka iyo dhaxalku ka tirsan yahay. Ku darista labada waxaan heli doonnaa isuduwaha isku dhufashada. Waxaa jira wadar ahaan afar kooxood oo qaraabanimo ah:
I: La korsaday iyo faraca ka yar 21 sano.
II: La korsaday oo ka soo farcamay 21 sano ama ka badan, korsaday, korsaday iyo xaas.
III: Damaanad -qaadyada heerka labaad (walaalaha) iyo darajada saddexaad (adeer, abtiyaal), iyo kor -u -kacayaasha iyo farcankooda
IV: Damaanad -qaadyada darajada afaraad (ilma -adeer), darajooyin aad u fog oo la yaab leh.
Gunnooyinka, jar -jaryada iyo wadarta bixinta
Ugu dambayntii, waa inaad dalbataa gunnooyinka iyo jar -jaryada labadaba kootada canshuurta. Mar labaad waxay ku tiirsan yihiin Jaaliyadaha ismaamulada ah. Bulshada Madrid, tusaale ahaan, sicir -dhimistu waa 99% khidmadda dadka koray, xaaska iyo faraca. Sababtan awgeed, dhaxalka Madrid ayaa aad uga faa'iido badan.
Yaa bixiya cashuurta dhaxalka?
Mabda 'ahaan, qofka mar walba laga rabo inuu bixiyo canshuuraha dhaxalka ayaa ah kan qaata aabbanimada. Sidaa darteed, shaygu waa sidaan:
Dhaxal: Ku -xigeennada, oo ah, dhaxal -sugayaasha, dhaxalka, iwm. cashuurta bixi.
Tabarucaad: Doneee, oo ah, qofka qaata deeqda, ayaa bixiya canshuurta.
Caymisyada nolosha: Ka -faa'iideystaha ayaa bixiya canshuurta.
Marka laga hadlayo qof sharci ah oo ka faa'iideysta dhaxalka, oo sidaas ku kordhisa hantidiisa, laguma canshuuro canshuurta dhaxalka, haddii aysan ahayn canshuurta shirkadda. Tani waa sababta oo ah dadka sharciga ahi waa koox dad dabiici ah oo dhinacyo saddexaad uga jawaaba hantidooda, ee aan ku lahayn hantida xubnahooda.
Marka laga hadlayo muddada lacag -bixinta, way kala duwan tahay iyadoo ku xiran hadba xaaladda. Xagga dhaxalka, kuwa ka dambeeya waxay haystaan ​​wadar ahaan lix bilood laga bilaabo maalinta qofka dhinto. Dhinaca kale, marka ay timaaddo tabarucaadka, waqtiga soo -gudbinta waa 30 maalmood oo shaqo laga bilaabo maalintii deeqda la sameeyay.
Hadda waa inaan baarno oo kaliya waxa xeerarku ku yaal Beesheena Madaxbannaan si aan u awoodno inaan xisaabinno inta aan ka bixin doonno dhaxalkayaga. Haddii aan nasiib leenahay waxaan ku noolnahay hal meel oo ay tahay inaan bixinno qaddar astaan ​​ah oo keliya, oo haddii aan nasiib -darradu waa inaynu sii dayno lacag aad u badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Cashuurta » Canshuurta dhaxalka